चन्द्रागिरी चक्रपथ निर्माण र पर्यटन विकासमा हामी केन्द्रित छौं -उत्तमबहादुर राउत – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
» मैनालीलाई राजिवलोचन स्मृति पुरस्कार प्रदान
» यसरी गर्छ चौधरी ग्रुपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टेडर्सले उपभोक्तामाथी ठगी
» रियलस्टेट मास्टरमाईन्ड तालिममा कम लगानीमा गुणस्तरिय घर बनाउने तालिम सम्पन्न
» ग्रील तथा स्टील उद्योग मैत्री नीति नियम बनाउन सहयोग गर्ने सरकारसंग माग
» The Leaked Secrets to Buy Coursework Discovered
चन्द्रागिरी चक्रपथ निर्माण र पर्यटन विकासमा हामी केन्द्रित छौं -उत्तमबहादुर राउत
- November 30, 2018 मा प्रकाशित
-उत्तमबहादुर राउत (चन्द्रागिरी नगरपालिका १५ नं. वडा अध्यक्ष)
२०३१ सालमा च.न.पा. १५, तीनथानामा जन्मनु भएका उत्तमबहादुर राउत अरवन योजना र आरकेलोजी कल्चरमा मास्टर गर्नु भएका कुशल र इमान्दारी व्यक्ति हुनुहुन्छ । राउत हाल च.न.पा. ६ का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सफल नेतृत्वका रुपमा चिनिनु भएको उहाँले पछिल्लो समय वडाको विकासका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ योजनाहरु ल्याउने र विकासको र कर उठाउने सवालमा अग्रणी रहँदै आएको सो वडालाई सुन्दर बनाउने महत्वपूर्ण कृयाकलाप र योगदानमा उहाँ सक्रिय रहनु भएको पाइएको छ । वडाध्यक्ष राउतसंग तीव्रखबर प्रतिनिधीले लिएको वार्ताको सारसक्षेप :
नगरपालिकाको विकास निर्माणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
चन्द्रागिरी नगरपालिकाको यो वर्षको दोश्रो कार्य योजनाको कार्यान्वयन हो । विशेष त फोहर मैला, च.न.पा. चव्रmपथमा फोकस गर्ने, शहरी विकास मन्त्रालय सहयोग एकिकृत शहरी विकास योजना निर्माण गर्ने परामर्श दाताहरु कम गर्दैछन् । ४/५ वटा कार्यक्रमहरु छन् । डि.पी. आर हुँदैछ । ३० करोड खर्च छुट्याइएको छ । पर्यटन पथमार्ग प्रस्तावमा छ । बल्खु करिडोर, च.न.पा. भवन निर्माण, राजर्मागको सडक वनाउने र यो नगरपालिकामा फोहर मैलामूक्त गर्ने एवम् पर्यटन पथर्माग मच्छेगाँउ, मातातिर्थ, महादेवस्थान, दहचोक, आदि स्थानमा पर्यटन पथमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ ।
विकास निर्माणको नयाँ योजनाहरु के के छन् नी ?
१५ नं. वडाको विकासका लागि विशिष्ठ साँस्किृतिक पहिचान भएको स्थान होइन । यहाँ मिश्रित बसोबास भएको क्षेत्र हो । यो वडा काठमाडौं महानगरपालि काकिर्तिपूर नगरपालिकासँग जोड्ने वडा भएकोले यहाँ शहरीकरण भैरहेको छ । यसलाई बस्ती व्यवस्थीत वनाउन पहल गरिरहेका छौं । यो वडाको ३ वर्ष भित्र सवै वाटो, सडकको धुवा, हिलो मुक्त गरी सफा, स्वस्थ वनाउने योजना छ । भौतिक योजना मन्त्रालयको सहयोगमा पूल वनाउने काम हुदैछ । झण्डै २ हजार वर्ष पूरानो विष्णुदेवी मन्दिर विकासका लागिकार्य योजना भई रहेको छ । रिभर फ्रन्ट कार्यक्रम अनुसार २ करोड ६१ लाख (नदि किनार विकाश कार्यक्रम) विष्णुदेवी मा.वि.को नयाँ भवन निर्माणको तयारीमा छौं । किर्तीपूरसँग जोडिएकोले फुट टैल वनाउने जिप फ्लाण्ड वनाउने, यहाँका जनतालाई सहभागी गरी जनता सँग (शेयर) लगानी गरी (केवलकार) जस्तै जिप फ्लाण्ड वनाउने र जनतालाई आम्दानी गर्ने योजना छ । हामीले यहि वर्ष नैकाप विष्णुदेवीमा १ करोडको सरकारवाट सडक वनाउने र तीनथानाको मगर गाँउमा पक्की सडकको लागि ५० लाख प्रदेश सरकारको सहयोगमा सडक वनाउने कार्य अगाडी वढाउदै छौं । न.पा. को २ करोड १० लाखमा वाटो फलैंचा पार्क वनाउने काम गर्दैछौं । शिक्षा क्षेत्रमा ५ वटा निजि विद्यालय, १ सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गरेका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाब फ्रि छ जसमा दिशा, पिसाब, रगत निशुल्क उपचार भएको छ । यहाँको बसोबास मिश्रीत भएकोले सवै मिलेर किर्तीपूरको भिरलाई साकुरा पार्क वनाउने योजना छ । त्यसको लागि जापानीहरुसँग सहकार्य भई सकेको छ । यहाँको परम्परा नेवारी समुदायले कपडा बुन्ने तानलाई विकास गरी महिला उत्थान पूर्नजागरण कार्यक्रम संचालन गर्दैछौ । अहिले १५ वटा तान मर्मत गरि संचालानमा ल्याएका छौं ।
स्थानिय महिलाहरुलाई रोजगारी मूखि बनाउने के कस्ता प्रयासहरु भएका छन् ?
हस्तकलाको विकासकालागि यहाँ महिलाहरुलाई उत्पादन गर्न लगाएर विभिन्न देश निर्यात गर्दे विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न मद्दत पुग्न सफल हुन्छ । यो १५ वडामा सफा सुन्दर र स्वच्छ वनाउने काममा साइनवोर्डमा फोहर फाल्नेको सुराकी गर्छु, मेरो टोल मै सफा गर्छु जस्ता नारा ठाँउठाँउमा राखेका छौं । ठाँउठाँउमा २७ वटा डस्टविन राखेका छौं । फोहर व्यवस्थित गर्न र मल वनाउन ८८ जना महिलालाई तालिम दियौं । टोलको कुनाकुना सफा गर्न एउटा जना स्टाफ नै राखेका छौं । अव ठाँउठाँउ फोहर संकलन गर्ने डस्टवीन राख्ने योजना छ । यो वडामा २०० वटा सडक वत्ती जोडेका छौं । विष्णुदेवी मन्दिर निर्माण ३५ लाख छुट भएका त्यस सुन्दर र व्यवस्थित वनाउने काम हुदैछ । म आफै पनि अरव प्लानिङ अध्ययन हुनाले यस वडामा सवै काम र योजना व्यवस्थित ढंगले अगाडी वढाउने काममा लागि परेको छु ।
काम गर्ने बाताबरण कस्तो छ ?
राजनैतिक दल भन्दापनि जनताले अभिमत दिएर म यस ठाँउमा काम गर्न आएको छु । मैले काम गर्ने हो, त्यो काम को विपक्ष साथीहरु अभिलेख लगायत काम विपक्षी गर्ने हो । मेरो कमी कमजोरीलाई केलाउने हो । मैले गरेरका कामप्रति सन्तुष्टी या असन्तुष्टी देखाउने हो । म दल भन्दा पनि नागरिक सँग काम गर्ने हो । यस च.न.पा.मा राजनैतिक दल भन्दा काम ल र दलाल दल मात्रै छन् । दलाल दल भनेको भुमाफिया, गुंण्डागर्दी, जुवातास आदि दलाल, विचौलिया जस्ताले गर्दा यो न.पा. मा नराम्रो असर परेको छ । हामीले सरकारी जग्गा करिव २७/२८ रोपनी भुमाफियावाट फिर्ता लिइसकेको छौं । अरु पनि अनुसन्धान हुँदैछ । अर्को कुरा अहिले कर असुलीमा नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भएका छौं । यस वडाले १२ महिनामा ५२ लाख राजश्व उठायौं । १५हजार पुरस्कार पायौ । अव हामी १ करोड राजश्व उठाउने योजना थियो । यो ४ महिनामा ५३ लाख राजश्व उठीसकेको छ । जे लक्ष्य थियो त्यो भन्दामाथि जान्छ होला । केलरी–नागढुङ्गा सडक वनाउन र पिच गर्न सवै सँग वार्ता गरी १५ वडाभित्रको हाइवे राजमार्गलाई टुङ्याउने काम हुँदैछ । अहिले यहि काममा निरन्तर लागेका छौं । जनताको स्वस्थ्यमा असर पर्ने भएकोले दिनको धेरै पटक धुवाँ नियन्त्रण कार्यक्रम गरी ट्याङकर भाडामा लिएर सडकमा पानी हालिरहेका छौं । अव यो मंसीर भित्र सडक पिच हुन्छ । विकासमा भष्ट्राचार हुने भएकोले यसलाई रोक्न उपभोक्ता समिति गठन गरेको छौं । पून्य कमाउने कामतिर लाग्ने वनाउछौं । म १० लाख भन्दामाथिका योजना आफै हेर्छु ।
अन्तमा तीव्रखबर मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो मुलुक समृद्धि वनाउने कुरामा काम गर्नुप¥यो । यसमा सडक÷रेललाई अगाडी वढाउन पर्दछ । हामी भारत आश्रित मात्र हुनु हुन्न । चिनलाई पनि सडक र रेल ल्याउनेमा पहल गर्नु पर्दछ । यो हाम्रो सामाजिक, आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गरी विकासलाई अगाडी वढाउन हामी सवै आफ्नो क्षेत्रवाट पहल गर्न पर्दछ भन्ने कामना गर्दछु ।
मैनालीलाई राजिवलोचन स्मृति पुरस्कार प्रदान
यसरी गर्छ चौधरी ग्रुपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टेडर्सले उपभोक्तामाथी ठगी
रियलस्टेट मास्टरमाईन्ड तालिममा कम लगानीमा गुणस्तरिय घर बनाउने तालिम सम्पन्न
ग्रील तथा स्टील उद्योग मैत्री नीति नियम बनाउन सहयोग गर्ने सरकारसंग माग
सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्दै क्यासिनो सञ्चालक (प्राइम टिभीबाट भिडियो साभार)